Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ » Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း )
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
ညအိပ်မပျော်ခြင်းသည် အိပ်ပျော်သွားဖို့ရာ ခက်ခဲသည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ကောင်းကောင်း အိပ်စပ်မရသည့်အခြေအနေ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်ပါသည်။ အိပ်ချင်လျှင်နေသော်မှ အိပ်ပျော်အောင် လုပ်မရသည့် နာတာရှည်အခြေအနေတစ်ခုလည်း ဖြစ်၏။ ညအိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်လာလျှင် များသောအားဖြင့် မကြည်မလင်နိုးထရတတ်ပြီး နေ့အချိန်တွင် အလုပ်များကို ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အရ မှတ်တမ်းကောက်ယူထားသော လူများ၏ ၂၇%တွင် အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသမီးများသည် ပြောင်းလဲလွယ်လွန်းပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျမှု ပိုဖြစ်လွယ်သောကြောင့်ပင်။ အသက်အရွယ်မရွေးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အသက်ကြီးလေလေ ညအိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများလေလေဖြစ်၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သော အချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ သို့သော် မအိပ်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် တခြားသောလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်၏။ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ-
ညအခါတွင် နိုးနေခြင်း သို့မဟုတ် အစောကြီးနိုးနေခြင်း
အိပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် အနားယူလိုက်ရသလို မခံစားရခြင်း
နေ့အချိန်တွင် မောပန်းပြီး အိပ်ငိုက်နေခြင်း
စိတ်မကြည်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း
အာရုံစိုက်ရာ၊ မှတ်သားရာတွင် ပြဿနာရှိခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပင်ပန်းခြင်း
ညအိပ်မပျော်ခြင်းကြောင့် နေ့ခင်းဖက်အလုပ်များ ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် သွားပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမှသာ သင်အိပ်မပျော်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် ကုသပုံကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အချက်ပေါင်းများစွာကြောင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်နိုင်၏။ စိုးရိမ်မှုနှင့် စိတ်ကျခြင်းတို့လို စိတ်အခြေအနေများသည် ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျန်းမာသောလူများတွင်တောင်မှ နေ့စဉ်လုပ်နေသည့် အကျင့်တစ်ချို့ကြောင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု – အလုပ်၊ ကျောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ မိသားစုအရေးများကို တွေးနေရခြင်းသည် ညအခါအိပ်မပျော်စေပဲ စိတ်ကိုအလုပ်ပေးနေနိုင်ပါသည်။
စိုးရိမ်စိတ် – စိုးရိမ်စိတ်သည့် အိပ်စက်ခြင်းအား နှောက်ယှက်သောကြောင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အိပ်စက်သည့်အမူအကျင့်မကောင်းခြင်း – ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်မှန်မှန် အိပ်ယာမဝင်ခြင်း၊ မအိပ်ခင် အိပ်ချင်ပြေစေသည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကစားခြင်း၊ သက်သောင့်သက်သာ မရှိသည့် အိပ်ယာနှင့် အိပ်ယာအား အိပ်စက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပြင် တခြားသောကိစ္စများကိုပါ အိပ်ယာပေါ်တွင် လုပ်ခြင်းတို့သည် အိပ်စက်သည့်အမူအကျင့်မကောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
ကဖိန်း၊ နီကိုတင်းနှင့် အရက် – အထက်ပါအရာများကို မွန်းလွဲပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းတို့၌သောက်ပါက ညအခါ အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော နီကိုတင်းသည့် ဦးနှောက်ပေါ်တွင် အာနိသင်ရှိသည်။ အရက်သည် နက်ရှိုင်းစွာအိပ်ပျော်သည့် အဆင့်များကို တားဆီးပြီး မကြာခဏဆိုသလို ညသန်းခေါင်တွင် နိုးစေတတ်ပါသည်။
ညနေခင်းဘက်တွင် အစားများခြင်း – အစားများခြင်းသည့် လှဲလျောင်းသည့်အခါတွင် မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်ပြီး အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ ထို့အပြင် အစာအိမ်တွင်းမှ အစာနှင့်အက်စစ်များ အစာရေမျိုပြွန်အတွင်းသို့ နောက်ပြန်စီးခြင်းကြောင့် ရင်ပူခြင်းတို့သည် အိပ်မပျော်အောင် နှောက်ယှက်နိုင်၏။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ – သင့်၌ရှိနေသော တစ်ခြားရောဂါများကြောင်းလည်း ညအိပ်မပျော်ခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ – ကာလကြာရှည်နာနေခြင်း (ကြွက်သားနာခြင်းနှင့် အဆစ်ရောင်ခြင်း)၊ အသက်ရှုခက်သည့် ရောဂါများ (GERD နှင့် ရင်ပူခြင်း) သို့မဟုတ် ဆီးခဏခဏသွားလိုခြင်း (ဆီးချိုနှင့်ညဖက်ဆီးသွားခြင်း)
ဆေးများ – တစ်ချို့သောဆေးများသည် ညအိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ – စိတ်ကျပျောက်ဆေးများ၊ ကော်တီကွိုက်များ၊ သွေးကျဆေးများနှင့် တခြားသော အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရနိုင်သည့်ဆေးများ
ငါ့ဆီမှာ Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ညအိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
လိင် – အမျိုးသမီးများတွင် ညအိပ်မပျော်ခြင်း ပိုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏။ ရာသီစက်ဝိုင်းအတွင်း ဟော်မုန်းများပြောင်းခြင်းနှင့် သွေးဆုံးပြီးနောက် ပြောင်းလဲခြင်းတို့သည့် အဓိကအကြောင်းများဖြစ်ပါသည်။
အသက်အရွယ် – အသက် ၆၀ အထက် ရှိသွားပါက အိပ်ပုံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးတို့ကြောင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်းသည် အရွယ်ကိုလိုက်ပြီး ပိုဖြစ်လာနိုင်၏။
စိတ်ပြဿနာများ – စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ Bipolar ဖြစ်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်ပြီးနောက်ရသော ဖိစီးမှုပြဿနာတို့ဠို စိတ်ရောဂါများရှိနေလျှင်
သင့်အလုပ် – ညအခါတွင်ပါ လုပ်နေရသည့် အလုပ်မျိုး သို့မဟုတ် နေ့ည အချိန်ပြောင်း လုပ်ရခြင်းတို့တွင် ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ခရီးသွားခြင်း – ခရီးဝေးသွားရသည့်အခါတွင် အိပ်မပျော်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။ အချိန်ဇုမ်များစွာကို ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားရခြင်းသည်လည်း ညအိပ်မပျော်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်အခြေအနေအား ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ မေးခွန်းများစွာကို မေးပါလိမ့်မည်။ သင့် အိပ်လိုက်နိုးလိုက်ဖြစ်သည့် ပုံစံကိုသိရန်နှင့် နေ့အချိန် အိပ်ငိုက်သည့်လယ်ဗယ် ဘယ်လောက်ရှိမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် သင့်ကို မေးခွန်းပုံစံများတွင် ဖြည့်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ အိပ်စက်ခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ရန် ဒိုင်ယာရီတစ်ခု ဆရာဝန်မှ ပေးပါလိမ့်မည်။
အိပ်မပျော်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကို ဆရာဝန်မှ သတိပြုမိပါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများဖြင့် အောက်ခံအကြောင်းရင်း ရှာပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် စမ်းသပ်ရမည့် ပစ္စည်းများလည်း ရှိနေပါက သင်အိပ်ပျော်စဉ် ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ရန် လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ဦးနှောက်လှိုင်းများ၊ အသက်ရှုခြင်း၊ နှလုံးခုန်ခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့် ခန္ဓါလှုပ်ရှားမှုများ စသည်။
Insomnia (ညအိပ်မပျော်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်နိုင်စေရန်အတွက် သင်၏ အိပ်စက်သည့်ပုံစံနှင့် ဆေးများကို ပြောင်းလဲရန် လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် သင့်အား အိပ်ပျော်စေမည့်နည်လမ်းများ၊ အိပ်စက်မည့်နေရာအား ပြင်ဆင်ပုံများပါသည့် အမူအကျင့်ကုထုံးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုနည်းလမ်းများနှင့် ရောဂါအားမကုသနိုင်လျှင် အိပ်စက်အနားယူစေနိုင်မည့် ဆေးများကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆရာဝန်မှ သင့်အား အိပ်ဆေးများဖြစ်သော zolpidem (Ambien), eszopiclone (Lunesta), zaleplon (Sonata) or ramelteon (Rozerem) အား အိပ်ပျော်စေရန် ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အိပ်ဆေးများသည် နောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်မှုများ ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်ဆေးများကိုရေတိုသာသောက်ပြီး ဘယ်ဆေးများကို ရေရှည်သောက်ရမည်ကို သေချာသိထားရပါမည်။
ဆရာဝန်မှလည်း ဒီတိုင်းဝယ်ယူနိုင်သော ဆေးများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုဆေးများတွင် အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေသည်မက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်သော Antihistamine များ ပါရှိပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ညအိပ်မပျော်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ညအိပ်မပျော်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးများကို စစ်ပါ – မှန်မှန်ဆေးသောက်နေရလျှင် အိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေသလားဆိုသည်ကို ဆရာဝန်နှင့်ပြသစစ်ဆေးပါ
တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ခြင်းများကို ရှောင်ပါ – ၃၀ မိနစ်ထက်မပိုသော တစ်ရေးတစ်မောအိပ်ခြင်းသည် အဆင်ပြေ၏။ ၃ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်စက်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
ကဖိန်းနှင့် အရက်ကိုထိန်းပါ၊ နီကိုတင်းမသုံးပါနှင့်။
အစာအများကြီးစားခြင်းနှင့် အချိုရည်သောက်ခြင်းများကို မအိပ်ခင် မလုပ်ပါနှင့်။
Insomnia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/insomnia/basics/lifestyle-home-remedies/con-20024293. Accessed June 14, 2016.
Insomnia. https://sleepfoundation.org/insomnia/content/what-causes-insomnia. Accessed June 14, 2016.
Insomnia. http://www.nhs.uk/conditions/Insomnia/Pages/Introduction.aspx. Accessed June 14, 2016.
Insomnia. http://emedicine.medscape.com/article/1187829-overview. Accessed July 14, 2016.
အိပ်မပျော်ခြင်းဝေဒနာကို ကုစားသက်သာပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ